အနာဂတ်ကို ချယ်မှုန်းကြသူများ | Local Resources Centre
Khaing Pwint Aung Tuesday, February 19th, 2019
ဝါသနာနှင့် ဝမ်းစာ နှစ်ဖက် လွန်ဆွဲသော အခြေအနေကို လူတိုင်း ကြုံဖူးလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် စိတ်ဝင်စားသော အလုပ်နှင့် လက်တွေ့အလုပ် ထပ်တူကျ ပိုင်ဆိုင်ထားသော သူများကိုမူ ကံကောင်းသူများစာရင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ရပေမည်။ ကရင်ပြည်နယ် ၊ သံတောင်မြို့အနီးတွင် နေထိုင်လျက်ရှိကြသော လူငယ်နှစ်ဦးသည်လည်း ကံထူးသူ ၂ဦး စာရင်းဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။
မိမိဖြစ်ချင်သော အနာဂတ်အိပ်မက် ပိုမိုကောင်းမွန်သေချာရန် မဆိုထားနှင့် ၊ မျက်မှောက်ခေတ်လူငယ်များသည် မိမိရှေ့ရေးအကြောင်း တွေးပူရန်ပင် ဝန်လေးတတ်ကြသည်။ သို့သော်ငြား “ကျွန်တော်က စက်ပြင်တာကို ဝါဒနာလည်းပါတယ် ဆိုင်လည်းဖွင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ သူများနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်းတတ်ထားမှအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ အဲ့တာ ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်း ကြည့်နိုင်အောင် နားလည်အောင် ဒီသင်တန်းကို ကျွန်တော်လျှောက်တာပါ။” ဟူသော စောပီတာ၏ စကားကြားရသောအခါ ၎င်းသည် ဤသင်တန်းအပေါ် တိကျသော မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။
Saw Peter and Saw Myo Naing fixing the generator in training centre
ထိုနည်းတူစွာ စောမျိုးနိုင်မှလည်း “စက်အပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ လာတက်ဖြစ်တာပါ။ ဆိုင်ကယ်သာစီးတာ စက်တွေဘာတွေပျက်ရင် ကျွန်တော်တို့ မပြင်တတ်ဘူးလေ။ ဆိုင်လည်းပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ အမေအဖေက ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းအပိုဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး ကိုယ်က ဆိုင်မပြင်စားတတ်တော့ အဲ့တာလည်းပါပါတယ်။” ဟုပြောသောအခါ လူငယ်နှစ်ဦး၏ ပျင်းပြသောဆန္ဒများ လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်လာသည်ကို မြင်ရသည်။
စောပီတာနှင့် စောမျိုးနိုင်သည် မတူညီသော ရွာနှစ်ရွာမှဖြစ်သော်လည်း ၁၃မိုင်ရွာတွင် တူညီသော ရည်မှန်းချက်များဖြင့် လာရောက်တွေ့ဆုံကြသည်။ သင်တန်းသည် လူငယ်နှစ်ဦးနေထိုင်သော ရွာနှင့် အလှမ်းဝေးသဖြင့် သင်တန်းကာလ ၃လပတ်လုံး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အသွားအပြန် ၃နာရီခန့် အချိန်ပေးရသည်။ သို့ရာတွင် ဝါဒနာပါသော အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နေရသည့် နည်းတူ မမောမပမ်း တက်တက်ကြွကြွဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းတွင် ဆိုင်ကယ်ပြင်ခြင်း ၊ မီးစက်ပြင်ခြင်း ၊ ပေါင်းကူးစက်ပြင်ခြင်းနှင့် ဆိုလာပြင်ခြင်း အတတ်ပညာများကို သင်ကြားပေးကြောင်း သိရပါသည်။ “LRC နဲ့ swiss ကိုတော့ ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော့်။ အခုကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေဆိုရင် တစ်ချို့ဆိုရင် ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ဒီမှာကလည်း အလုပ်အကိုင်တွေဘာတွေ ရှားပါးတယ် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အဆင်မပြေဘူူး။ ဒီလိုဘဲ နေ့စားတွေဘာတွေလိုက်လုပ်တဲ့ လူငယ်တွေ ရှိတယ်။ တစ်ချို့လူငယ်တွေကျတော့ နေ့စား မလုပ်ချင်ကြဘူး။ အလုပ်ရွေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။ ဒီလိုမျိုးသင်တန်းတွေဖွင့်ပေးတော့ သူတို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေတာပေါ့။ သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ အပိုင်းတွေ ဒီမှာဆိုရင် အများကြီးရှိတယ်လေ။ စက်ပြင်မှမဟုတ်ဘူး မီးလိုင်းတို့ဘာတို့ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကို သူတို့ ရွေးချယ်ပြီး သူတို့တက်ပြီး သူတို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။” ဟုလည်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Young men who paint their own future
Everyone hasapassion or interest and they need to work inacertain profession. If anyone is working inachosen profession with full passion that is considered to be lucky. There are two lucky young men in Thantaunggyi Township, Kayin State.
It is natural for young people to worry about their future to make their dream comes true. The two young men are interested in fixing things. The project funded by Swiss Contact and implemented by LRC has provided job opportunities for these young men. “I’m interested in fixing things. Besides, I am planning to openaworkshop in sooner future. But it might beaco-operating shop so that it would be better if I also know about machines and that reason encouraged me to apply this training” by Saw Peter.
Similarly, Saw Myo Naing said “I joined this training because my passion to learn about machine demanded to. Although I’m using motorbike daily, I don’t know how to fix it. Moreover, my parents runashop that sell spare parts of motorbike. If I can fix things by myself, I will be able to help in their business.”
They both traveled many miles to join the vocational training center to chase their dreams. It took3hours per day to get to training center by motorbike. Nevertheless, they did not even whisper about their fatigue. Instead, they actively participated.
Swiss contact gave technical support and Local Resource Centre (LRC) implemented the training. The vocational training includes many subjects such as fixing motorbike, generator, solar and tractor were taught to the trainers. “Job opportunities are quite rare in our township so that young people of our age are doing part-time job to survive. But there are some who do not want to do part-time job. Thus, having this kind of training is really supportive of them. Plus, there would be more job opportunities. Therefore, we really thank Swiss Contact and LRC” remarked by Saw Peter.